IRAN Oo Shaacisay In Saynisyahanka Nukliyeerka Lagu Dilay Qoriga Dayax Gacmeed Lagu Hago Oo Wata “Sirdoon Macmal Ah” – somalilandtoday.com
IRAN Oo Shaacisay In Saynisyahanka Nukliyeerka Lagu Dilay Qoriga Dayax Gacmeed Lagu Hago Oo Wata “Sirdoon Macmal Ah”
Qoriga dayax gacmeed lagu hago oo wata “sirdoon macmal ah” ayaa loo adeegsaday dilkii toddobaadkii la soo dhaafay ee saynisyahan sare ee nukliyeerka Iran, sida uu axaddii u sheegay taliye ku xigeenka ilaalada kacaanka.
Mohsen Fakhrizadeh wuxuu ku socday waddo weyn oo ka baxsan caasimada Iran ee Tehran isaga iyo ilaalo ka kooban 11 waardiye bishii Nofeembar 27, markii qoriga mashiinka “wajigiisa uu ku soo dhowaaday” oo uu toogtay 13 wareeg, ayuu yidhi Rear Admiral Ali Fadavi.
Fadavi wuxuu sheegay in madaxa amniga ee Fakhrizadeh uu riday afar xabadood “markii uu isku tuuray” cilmibaaraha iyo in “ayna argagixisadu goobta joogin”.
Mas’uuliyiinta Iran waxay ku eedeeyeen cadowga soo jireenka ah ee Israa’iil iyo kooxda mucaaradka dibad joogga ah ee People’s Mujahedeen of Iran (MEK) dilka.
Telefishanka ay maamusho dowladda ee Press-TV ayaa hore u sheegay in hub “lagu sameeyay Israa’iil” laga helay goobta.